Nnukwu egbe na ọnwụ: Ndị na-eyi ọha egwu ji egbe gbagote na họtel mara mma dị na Mogadishu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Nnukwu egbe na ọnwụ: Ndị na-eyi ọha egwu ji egbe gbagote na họtel mara mma dị na Mogadishu
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Safety • Akụkọ kacha ọhụrụ na Somalia • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ndị na-eyi ọha egwu ji egbe gbagotere ụlọ nkwari akụ na Mogadishu
Otu ndi oru egwu ojoo, ndi na-ekwu na ha bu ndi otu ndi Islamist nke Al-Shabab, na-abanye na SYL Hotel na Mogadishu, Somalia. Ndị ọrụ gọọmentị na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-agakarị ụlọ oriri na ọ luxuryụ luxuryụ ahụ.
Onye akaebe ahụ na-ekwu na a ka ga-anụ nnukwu egbe n'ime ụlọ ahụ, n'agbanyeghị na o doghị anya mmadụ ole nọ n'ime ya. Fọdụ kwukwara na ndị mwakpo ahụ eyiri uwe ndị ọrụ nchekwa Somalia.
Otu onye uwe ojii gwara ndị nta akụkọ Reuters, "Anyị chere na ha bụ ndị uwe ojii mana ha malitere ịtụ ogbunigwe ma gbaa anyị egbe mgbe ha rutere nso wee gbanyere anyị ọkụ n'ọnụ ụzọ ụlọ nkwari akụ ahụ."
Otu onye ome iwu gbara ọsọ site na ebe ahụ gwara ndị ọzọ na enwere ọnwụ, mana ekwenyebeghị nke a.
Ndị agha nchekwa nke Somalia na-ekwu na ha gburu mmadụ atọ n'ime ndị mwakpo ahụ ma kwuo na ha jisiri ike kpọpụ ndị isi na họtel ahụ ka mwakpo ahụ malitere.
Al-Shabab lekwasịrị anya na họtel ahụ na mwakpo bọmbụ ụgbọ ala na February 2016, na-egbu mmadụ 14 gụnyere ndị agha ise ma na-ebibi nnukwu ụlọ dị nso.
ndị nwụrụ Mogadishu Somalia ụjọ ọgụ